အာဖရိက orichteropes များသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားနေရသည် ကွန်ယက်မိုးလေဝသ
အာဖရိက orichteropes များသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားကြရသည်
အာဖရိက၏လူသားဖြစ်သော Cradle ဟုခေါ်သောတိုက်ကြီး၏အတွေးအခေါ်တိုင်းတွင်နယ်မြေ၏ကျယ်ပြန့်သောနေရာဖြစ်သောကြီးမားသောဆာဟာရသဲကန္တာရ၏ပုံရိပ်များသည်ချက်ချင်းသတိရလာလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ခြင်္သေ့ကဲ့သို့သောကြောင်များ သူတို့သည်ရှာတွေ့နိုင်သည့်အရိပ်အကွာအဝေးတိုင်းကိုယူကြသည်။
ဟုတ်တယ်၊ အာဖရိကကိုစဉ်းစားတာကအပူချိန်မြင့်တယ်။ နေ့စဉ်နီးပါး ၅၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်ထက်ကျော်လွန်သောတန်ဖိုးများ။ ဒါပေမယ့်အခြေအနေကပိုဆိုးလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်အရမ်းမှားတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းသည်အာဖရိကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သောအာဖရိကတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအပေါ်အကြီးအကျယ်ထိခိုက်ပျက်စီးစေသည်.
ဒီတိရိစ္ဆာန်တွေအကြောင်းသိပ်မသိရပေမယ့်အလျင်စလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုမှမှန်းထားတာထက်မြန်မြန်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်တယ်။ ထိုအရာကား, ဤအ furry ၏လူ ဦး ရေမျက်နှာကောင်းကောင်းနဲ့ ပိုပိုပြီးရှားပါးလာပြီဖြစ်ပါတယ် မိုးရွာသွန်းမှုနည်းပါးခြင်းနှင့်အစားအစာရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
အပူရှိန်မြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရန်အခက်တွေ့နေသောပုရွက်ဆိတ်များနှင့်ခြမ်းများ - Kalahari သဲကန္တာရသို့ရောက်သောမိုးခေါင်မှုသည် ၀ င်တိုက်စားသူများဟုခေါ်သည့်နေရင်းဒေသလည်းဖြစ်သည်။ အဲ့ဒါကြောင့် အဆိုပါ orichteropos ပျောက်ကွယ်နေကြသည်.
ဇီဝကမ္မဗေဒပါမောက္ခအန်ဒရီယာဖူလာကညအချိန်တွင်တိရိစ္ဆာန်များသည်နေ့အချိန်၌အင်းဆက်ပိုးများကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်စွမ်းအင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ တစ်နှစ်စောင့်ကြည့်ခံခဲ့ရသောခြောက် ဦး အနက်ငါး ဦး မှာသေဆုံးခဲ့သည်။ သူ၏ခန်ဓာကိုယ်အပူချိန်သည် (၂၅) ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်စ်သို့ကျဆင်းသွားသည်။ ပုံမှန်အတိုင်း ၃၇ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ရှိသည်။
အ သုတေသီများ အချို့သောတွားသွားသတ္တဝါများ၊ ငှက်များနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များသည်မြွေကောင်များထွန်ကြောင်းများကိုစတင်အသုံးပြုလာကြသဖြင့်အမွေးကောင်များမှာရရှိနိုင်သည့်အမိုးအကာများမှဝမ်းနည်းစွာထွက်ပြေးနေကြရသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း » အာဖရိက orichteropes များသည်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းကိုခံစားကြရသည်
အဆိုပါ Atacama သဲကန္တာရပန်းပွင့်ပုံပေါ်ပါတယ်
ကမ္ဘာပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုသည်မပျက်စီးနိုင်သောအဆင့်သို့ရောက်ရှိသည်